Torolàlana fialantsasatra ho an'ny marketing amin'ny finday | Martech Zone
Sabotsy 23 Novambra 2013 Alahady, Martsa 7, 2021 Douglas Karr
Efa akaiky ny zoma mainty ary 55% ny mpanjifa mampiasa rindranasa fiantsenana amin'ny finday avo lenta isan-kerinandro! Izahay dia efa nizara infografika vitsivitsy tamin'ny fiantsenana fialantsasatra sy ny finday toy ny Maninona ny orinasanao no tokony ho vonona amin'ny finday mandritra ny fialantsasatra ary Ny fiakaran'ny varotra finday sy ny tombony ho an'ny mpivarotra.
Ity infographic avy amin'ny Marketing Chip Blue manome angon-drakitra momba ny karazana paikady tadiavin'ireo mpampiasa finday ireo. Ny fahafantarana ny toerana, ny ora amin'ny andro, ny demografikan'ny mpampiasa anao dia afaka manampy amin'ny fividianana fividianana finday. Ary ny fanomezana fitaovana hanolorana ny fividianana sy hananganana lisitra fiantsenana dia mety hanampy koa!
Tags: fampiasana appfampiharana couponMobile Appsfifanakalozana findaytapakila findayfinday posfiantsenana findaylisitra fiantsenanafinday avo lentatakelaka